देउवा आउट, ओली इन : ओलीले के गर्लान ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काम त गर्‍यो नै तर पनि जति सक्थ्यो त्यति जस लिन भने सकेन । स्थानीय तह हो वा प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन । सबै निर्वाचन देउवा नेतृत्वकै सरकारले गरायो । त्यति मात्र होइन, मुलुकको नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने पहिलो खुड्किलो पार गरायो अर्थात संविधान कार्यान्वयनको पहिलो कदम देउवाकै नेतृत्वमा सम्पन्न भयो । यी सबै कार्यभार पूरा गर्दा पनि उनी खास लोकप्रिय बन्न सकेन, आफ्नै नेतृत्वमा भएका कामको पनि जस लिन सकेनन् ।
देउवाले पछिल्लो समयमा सत्तामा रहने जुन किसिमको इच्छाशक्ति देखाए । त्यसको नकारात्मक प्रभाव आम जनसमुदायमा पर्न गयो । काम चलाउ सरकार बनेपछि पनि देउवाले पूर्ण कार्यकारी सरकारभन्दा पनि माथि उठेर भटाभट राजनीतिक नियुक्ति दिए ।
जसका कारण पनि देउवामाथि राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न उठ्यो । जनमतले अर्को शक्तिलाई शासनको बागडोर दियो तर देउवाले दम्भ देखाउँदै गरेको राजनीतिक निर्णयहरुले देउवाको कद उचो बनाउनुको सट्टा कमजोर बनाइदियो । कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिक नियुक्ति दिँदा आर्थिक प्रलोभनमा परेको समेत सार्वजनिक भएपछि देउवा विवादमुक्त हुन सकेन ।
देउवा सत्ता फर्केर हेर्दा
कांग्रेस महाधिवेशनबाट पार्टी सभापति बनेपछि देउवा गणतन्त्र नेपालको ४० औ प्रधानमन्त्री भए, माओवादीको बैशाखी टेकेर जेष्ठ २३ मा पुनः सिंहदरबार छिरे । यसअघिका सबै कार्यकालमा विवादित बनेका देउवा, चौथो पटक मुलुकको शासकीय बागडोर सम्हाल्दा पनि विगतको गलत नजिर सल्टाउन सकेन बरु थप विवाद र आलोचनाको पात्र बने ।
प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी आड भरोसामा सत्ताको चावी लिएर सिंहदरबार छिरेका देउवाले धेरै दुरगामी कामको फत्ते पनि नगरेका होइनन्, तर उनले लोकतन्त्र, विधि, परम्परा, मूल्य मान्यतालाई लत्याउँदै अघि बढे ।
जस पाउन लायक सबै कामलाई समेत गलत निर्णयको हिलोले छ्रयाप्दै ओझेलमा पारे । प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा आसिन हुँदा पनि आफ्नो विवेक भन्दा आवेगमा चल्ने स्वभावका देउवा तीनै तहको निर्वाचन निर्विवाद सम्पन्न गराउन सक्षम भएको तथ्य भुल्नु हुदैन । तर चुनाव गराएर इतिहासको गौरवमय जस लिने अवसरलाई उनले तिलान्जली दिए संसदीय परम्परलाई उल्टाउँदै राज्य स्रोतमाथि चरम दुरुपयोग गरेर ।
चौथो पटक सिंहदरबार छिरेका देउवाका २३४ दिन
निर्वाचनमा सफल भए पनि सुशासनमा करिब एक सय प्रतिशत विफल
जम्बो मन्त्रीको भीड निर्माण गरे, २०५२ सालको ५२ सदस्य भएको मन्त्रीको भीडलाई चुनौती दिँदै इतिहासकै सबैभन्दा बढी करिब पौने एक सय (६४) मन्त्रीहरुको भीड जुटाउन सफल । इतिहासमै सबैभन्दा बढी विनाविभागीय मन्त्री बनाएर नयाँ रेकर्ड कायम ।
चुनाव हारेकै झोंकमा मन्त्रिपरिषद्को ठाडो निर्णयबाट सस्तो लोकप्रियता कमाउन राज्यको अर्बाै रुपैयाँ दायित्व बढ्ने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि
भुकम्प पीडितलाई थप एक लाख दिने ठाडो निर्णय, एक खर्ब बढी दायित्व बढ्ने गरी बजेटको स्रोत विना नै निर्णय
सरकारी स्वामित्वको नेसनल टे«डिङ खारेजी
बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज
सदाचारको निर्णय, तर, करिब २० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर १५ सय कर्मचारीलाई विदेश शयर गराए । सुशासन र सदाचारलाई गम्भीर धक्का दिँदै देउवाले आफू दल निकटलाई विदेश घुमाए
विधिलाई उल्टाउँदै विगतका सरकारको तुलनामा आफन्त र कार्यकर्तालाई करिब आधा अर्ब रुपैयाँ बाँडेर श्रेष्ठता हासिल
तीनै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न । तर भदौयता ५ दर्जन जति राजनीतिक नियु्क्ती । करिब अढाई सय सरुवा बढुवा, करार नियुक्ती इत्यादी गरी निर्वाचन आचारसंहिताको ऐतिहासिक उल्लंघन
विशेष गरी मुलुकको संचित कोष चरम दुरुपयोग गरेको आरोप खेपेका देउवाले सयौ राजनीतिक नियु्क्ती गरे नै । तर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले नसमेटेका विषयलाई मन्त्री परिषदको ठाडो निर्णय गराइ छाडे । आफ्नै निकटका आसेपासेलाई करोडौ रकम बाँड्ने मात्रै काम गरेनन् । अस्पतालका बिरामीलाई औषधी उपचारको लागि आफै उपस्थित भएर साहयता चेक हस्तान्तरण गरेका देउवाले ती चेक नै पुनः फिर्ता गराएर लोक हँसाउने काम गरे । निर्वाचनपछि जेजस्ता निर्णयहरु भए ती निर्णयले उनले गरेका केही राम्रा काम पनि ओझेलमा परे ।
जेष्ठ २४ सिंहदरबारको सत्ता साँचो लिन पुगेका देउवा फाल्गुन ३ मा बाहिरिए शितलनिवासलाई राजीनामा थमाउदै आउट भए । जति जति पटक देउवा मुलुकको शासन सत्ताका लागि सत्तारोहण गर्छन् उति उति पटक अलोकप्रिय बन्दै सत्ताबाट बर्हिगमन हुने गरेका छन् ।
यद्यपि चौंथो पटक प्रधानमन्त्री भएर संघीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचन गराए देउवाले । निर्वाचन जस्तो महत्वपूर्ण कार्य सम्पदान गरेपनि पनि सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्दा देउवा दर्जनौ आलोचनाको भारी बोकेर सिंहदरबारबाट बाहिरिएका छन् । उनले गरेका दर्जनौ गलत निर्णयले मुलुकको नीति र विधिलाई कमजोर त बनायो नै, उनकै पाटी समेत जनमासमा सर्वाधिक अलोकप्रिय बन्यो ।
शासन र प्रशासनलाई चुष्त दुरुस्त र सुशासनका मुख्य आधार स्तम्भलाई आधार मानेर अघि बढ्नु लोकतान्त्रिक र कल्याणकारी राज्यको आत्मा र मर्म हो । यही आत्मा र मर्मको मार्गदर्शनबाट मुलुकको पाङ्ग्रो अगाडि बढाउन थालिएको हो पनि । तर, लोकतन्त्रपछि पनि जो जो सत्तामा पुगे उनीहरुले लोकतन्त्रको विधिलाई आत्मसाथ गरेनन् बरु दलबलका भरमा उल्टाइदिए, सुशासनको विधि र सिद्धान्तलाई । अरुहरुले पनि तागतले भ्याएसम्म नगरेका होइनन् तर देउवाले चुनावमा हार बेहोरेको झोकमा धेरै नै बढी गरे राज्यस्रोतमाथि ब्रम्हलुट ।
चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिंदा देउवाले २०५२ सालको ऐतिहासिक रेकर्डलाई उल्टादिए । गत जेष्ठमा सिंहदरबारको चावी समाएका देउवाले सत्ताबाट बाहिरिनु अघि गरेका गलत निर्णयले लोकतन्त्र र विधिको शासनलाई गिज्याइरहेको छ । पुग न पुग पौने एक सय सदस्य रहेको मन्त्रीहरुको भीड जम्मा गरेर राज्य श्रोतको दोहन त, गरे नै देउवाले, निर्वाचन जस्तो राष्ट्रिय कार्यक्रमलाई पनि गिज्याउने गरि निर्वाचन आचारसंहिताको समेत चर्काे उल्लघन गरे ।
चुनाव अगाडि केही सन्तुलनमा रहेका देउवा चुनावी परिणाम आएपछि विधिलाई उल्टाउदै गलत निर्णय गरे । देउवाले गरेका गलत निर्णयले शासनमा कुशासन थपिदिएको छ भने आर्थिक अनुशासनलाई चौपट बनाइदिएको छ । परनिर्भर अर्थतन्त्र भएको मुलुक नेपालका लागि यस्ता मनलाग्दी निर्णयले आर्थिक अपचलन त भएकै छ, मुलुकको व्ययभार उच्च बन्दा उत्पादन क्षेत्रलाई झट्का लाग्ने पक्का छ ।
कुल सरकारी ढुकुटीको यतिबेला उत्पादनमूखी क्षेत्रमा भन्दा सामान्य शिर्षकमा बढी खर्च गर्ने प्रचलन ह्रवात्तै बढेको छ । यो प्रचलनको शुरुवाती देउवाले मात्रै गरेका हुन् भने दोष दिने ठाँउ छैन । यस्तो प्रचलनको हिस्सेदारहरु अरु पनि धेरै छन् । तर देउवा भने अरुलाई ४ माइलको दुरीमा रोकेर आफूलाई अग्रभागमा नाम दर्ज गर्न सफल भए । यसका कारण देउवा सरकारीको श्रोतको चरम दुरुपयोग गर्ने कुशल र सबैभन्दा योग्य प्रधानमन्त्री बनेर इतिहास रचेको कुरा भने सत्य हो ।
पूँजीगत खर्च हुन नसकेर वर्षेनी बजेट फ्रिज भएका समाचार बाहिर आउने गरेका छन् । चुष्त सक्षम प्रशासनको अभावमा पूँजीगत खर्च गर्न नसकिएको हो । सत्ताको मुख्य जिम्मेवारबाट हुने स्वेच्छारी रकम बितरण र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने गलत प्रतिस्पर्धाले मुलुकलाई टाँट पल्टाउने पक्का पक्की छ । मुलुक शान्ति प्रकृयामा प्रवेश गरेपछि केही आर्थिक आयामहरुमा सुधार नआएका पनि होइनन्, तर नेपाल जस्तो विपन्न र परनिर्भर मुलुकका लागि यस्ता स्वेच्छचारी खर्च गर्ने प्रतिस्पर्धाले कंगाल बनाउनेमा कुनै सन्देह छैन ।
मुलुकमा सार्वजनिक संस्थान भटाभट खारेजी हुदै आएका छन्, राष्ट्रिय उद्योगहरुको प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन । यूवा जनशक्ति पलायन भएको छ ।
कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब ३० प्रतिशत हाराहारी विप्रेषणले थेगेको छ । कृषिको भार पनि करिब ३६ प्रतिशतका हाराहारीमा छ । मुलुकको दैनिक प्रशासनिक खर्च २६ अर्वबाट बढेर ५७ अर्व बढी हुने पक्का पक्की छ । आन्तरिक उत्पादन कमजोर बन्दै गएको छ, भने आयातको वृद्धि उच्च छ । तथ्यांकैमा भन्ने हा,े भने आयात ९५ प्रतिशत रहेको बेला निर्यात ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यस्तो अवस्थामा मनलाग्दी पैसा बांढ्नाले आर्थिक सूचांकहरु प्रभावित भइरहेका छन् । सत्ता र शक्तिको नजिक हुनेहरुले अवसर लिइरहेका छन् भने आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपले कमजोरहरु झनै गरिबीको मार खेपी रहेका छन् । प्रतिव्यक्ति आय बढेको देखाइए पनि बहुआयामीक मानव विकासको सूचाँकको पारो ओरालो लागिरहेको छ ।
हुन त, गत वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर करिब ७ प्रतिशत नजिकै पुगेको विश्लेषण गरिएको थियो, तर, आर्थिक वृद्धिको दर बढेपनि मानव विकासको समग्र औसत बढ्न सकेन । आर्थिक अनुशासनको चरम उल्लघन हुदाँ मुलुकको आर्थिक चलहरु नकारात्मक रुपमा प्रभावित भइरहेका छ । यस्तो प्रभावले मुलुलाई आर्थिक रुपमा जर्जर र शासकीय रुपमा भ्रष्ट बनाउने गरेको टिप्पणी हुने गरेको छ ।
ओलीले के गर्लान ?
२०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले राज्यको पुर्न संरचनासहितको शासकीय स्वरुपलाई निर्देश गरेको हो । जनआन्दोलनको मार्गनिर्देशनमा संविधानसभा होस या पहिलो संघीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो आम निर्वाचनबाट, सार्वभौम जनताको मतले अनुमोदन गरकै छ । जनताले पटक– पटक दलका नेताहरुलाई खुबै विश्वास गरेकै हुन् आफ्नो सार्वभौम जाहेर गरेर, होस या सशस्त्रदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा समेत प्रत्यक्ष सहभागी भएर । मुलुकमा सुशासन र समृद्धि होला भन्ने आकांक्षा र सपना देखेका हजारौ नागरिकले पटक पटकका आन्दोलनमा बलिदान र समर्मण पनि गरेकै हुन् । नयाँ राजनीतिक सरंचना स्थापित भएपनि राजनीतिक नेतृत्वको आचारण र व्यवहारमा बीसबाट उन्नाइसमा झर्न सकेन । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि अधिकांश नौ महिने म्यादी सरकार बने । अधिकांश सरकारले सत्ता बर्हीगमणको बेला अत्याधिक रकम बाँड्ने धन्दा सबै चलाए औसतमा कोही थोरै कोही धेरै भए होलान, तर गणतन्त्रपछिको देउवा सरकार विगत सबै विरासतलाई भत्काउँदै सरकारी श्रोतमाथिको दोहन गर्ने सर्वश्रेष्ठ बन्न पुग्यो सत्ता र शक्तिको बलमा ।
चालिसको उत्ताद्र्धतिर पु्र्नवहाली भएको प्रजातन्त्रपछि जबरजस्त लादिएको निरपेक्ष निजीकरणले मुलुकका राष्ट्रिय उद्योगहरु खरानी बन्दै गए । निजीकरणको नाँउमा सार्वजनिक संस्थान सरकारले घुइयाको भाउमा बिक्री हुदै गए । हरिसिद्धी इट्टा टायल, भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला उद्योगहरु सबै कौडीको भाउमा बेचेर मुलुकलाई परनिर्भरतारिता धकेलियो भने, बजारलाई सन्तुलनमा राख्न भन्दा छाडा छोड्ने अर्थनीतिले सीमिति घरानाहरु अथाह पूँजीको मालिक भए ।
मजदुरहरु सडकमा पछारिए । उता सरकार बिस्तारै टाँट पल्टिने अवस्थामा पुग्दै छ । ०४६ पछि मुख्य गरि कंग्रेसले सत्ताको चावी खुबै खेलायो भने बामपन्थीपनि त्यो श्रृखलाबाट अछुतो रहन सकेनन् । तर सबैले उही कंग्रेसले लादेको नीतिको विकल्प दिन सकेनन् । जतिसुकै प्रगतिशिल नीति र कार्यक्रम उद्घोष गरेपनि सत्तामा पुगेपछि त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको तितो अनुभव छ नेपाली राजनीतिमा । कंग्रेससंग बाम शक्तिहरु पनि आन्तरिक सीमित घराना तथा छिमेकी स्वार्थ रिझाउने र निहित स्वार्थको गतिलो व्यापार गर्न सबै लागि परेकै हुन् । औसतमा कसैले धेरै गरे होलान् ,कसैले थोरै । तर समग्रमा मुलुकको सुशासनलाई कायम गर्दै समृद्ध मुलुक बनाउन कसैलाई फुर्सद नमिलेको पक्कै हो । आर्थिक अनुशासनको उग्र व्यवहारका कारण नेपालको अर्थतन्त्र थिलो थिलो बन्दै गएको छ । यद्यपी संघीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो पटक भएको निर्वाचनले नयाँ जनादेश दिएको छ ।
नयाँ जनादेश दिएको जनाधिकार अनुसार भर्खरै बामपन्थी नेतृत्वमा सरकार गठनमाछ । विगतका गलत नजिरहरुलाई उल्टाउदै सुशान र समृद्धिको बाचा गरेको छ शब्द रटानामा नयाँ सरकारले यतिबेलासम्ममा । सत्ताबाट बाहिरिदै गर्दा इतिहासकै गलत नजिर बसालेको देउवा सरकारको गलत अभ्यासलाई सल्टाउनु उसका लागि पनि सजिलो विषय भने पक्कै छैन । यद्यपी मुलुकको ४१ प्रधानमन्त्रको चावी समाएर यतिबेला बामगठबन्धनको नेतृत्वमा सिंहदरबाको सत्ता पुगेको छ । बाम गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली सिंहदरबार प्रवेश गरेका छन् । देउवा सरकारले गरेका अनुचित निर्णयलाई कडा आलोचना गर्दै आएका ओली यसलाई उल्टाउने उद्घोष गरेका छन् ।
लोकतन्त्रलाई नै खिल्ली उडाउने गरि देउवा सरकारले गरेका अधिकांश निर्णय सुशासनको विरुद्ध छन्, आर्थिक अनुशासन र सदाचारको विपक्षमा छन्, चुनाव हारेका झोकमा गरिएका मनलाग्दी निर्णय मात्रै होइन विगतमा उनले गरेका गलत नजिरले मुलुक अप्ठ्यारोमा पर्दै गएको छ ।